Mametraka Lalàna Fanaraha-maso Mampiahiahy i Meksika · Global Voices teny Malagasy
Mametraka Lalàna Fanaraha-maso Mampiahiahy i Meksika
Voadika ny 08 Marsa 2012 7:18 GMT
Nametraka lalàna fanaraha-maso ankehitriny ny mpanao lalàna Meksikana , izay nanome fahafahana maimaim-poana tsy ilàna didy avy amin'ny fitsarana ny mpitandro filaminana hiditra amin'ny fanarahana ny misy ny olona iray ara-jeografika. Saika ny maro mihitsy ny nanaiky tanteraka io volavolan-dalàna io tamin'ny vato mpomba 315, mpanohitra 6 , ary tsy naneho hevitra 7. Nalefa tany amin'ny filoha izany mba ho ankatoaviny.
Mety hisy ny fanararaotana goavana amin'ireo fahefana vaovao ireo. Tsy ao anatin'io volavolan-dalàna io ny hoe maro amin'ireo finday ankehitriny no mandefa tsy an-kiato ny antsipirihan'ny toerana misy ny tompony any amin'ny tambajotra misy azy; koa satria avondrona aminà toerana iray avokoa ireo raki-toerana ireo—any amin'ilay mpanome ny tolotra fifandraisna—afaka hiditra anatin'ny rakitra lalindalina, mora takatra sy mikasika ny tena manokana tsy misy ohatra izany ny mpitandro filaminana miaraka amin'ireo fitaovana fanarahana maso ireo. Tokony hahatsapa bebe kokoa ny governementa Meksikana fa amin'izao fotoana izao dia mitahiry ny dian-tongotsika amin'ny andavanandro ny findaintsika.
Ho setrin'ny fametrahana io lalàna io, niteny tamin'ny EFF ny Meksikana mpisolovava ny zon'olombelona Luis Fernando García hoe “tokony hahatakatra ny solombavam-bahoaka Meksikana fa raha tsy misy aro riaka ara-dalàna ny ekipa mpanatanteraka io fanaraha-maso io dia hampidi-doza ny tsiambarantelon'ny mponina sy ny fiarovana azy, ary araka izany dia tsy mifandanja amin'ny zo maha-olombelona azy izany.”
Ny rakitra saropady tahaka izao dia mitaky fiarovana mafy, tsy ho takatry ny tànan'ny rehetra. Handinika ireo safidin-dalàna ilaina rehetra ireo mpisolovava ny zon'olombelona mba hiadiana amin'ny maha-ara-dalàna ny fepetra raisina. Mandritra izay fotoana izay, tokony handinika ny mety hisian'ny fangatahana alalana amin'ny fidirana amin'ny rakiny manokana voatànan'ny tambanjotrana findainy ny olom-pirenena Meksikana araka ny Lalàna Meksikana momba ny Fiarovana ny Rakitra.
Any Alemàna, nampiàsa lalàna momba ny tsiambaratelo mitovitovy amin'izay ilay mpisolovava momba ny fiarovana ny tsiambarantelo sady mpanao politika, Malte Spitz—izay tahaka ireo lalàna maro any amin'ireo firenena Eoropeana, manome ireo olon-tsotra ny zo hahafantatra ireo rakitra manokana momba azy ireo voatanan'ireo tambajotra—hanery ny tambajotra misy azy hamboraka ny zavatra voarakitra momba azy. Vokany, rakitra 35,831 samy hafa momba ny fampiasàny ny findainy nandritra ny enim-bolana, namboraka zavatra maro tamin'ny fampahalalàna manokana. Ho fampisehoana ny maha-tsiambaratelo izany rakitra izany, nanapa-kevitra ny hamoaka izany ho hitan'ny daholobe i Spitz. Jereo ilay sarin-tany mahavariana azo kitihana mikasika ny rakitry ny toerana nisy an'i Spitz raha mbola tsy nanao izany ianao.
Fotoana izao hampianarana ireo mpanao lalànantsika rehetra sy ny daholobe fa mila fiarovana matanjaka ny rakitra saropady . Hanohy hitatitra momba ny fanaraha-maso ireo finday sy ny aterineto any Meksika ny EFF.
Raha teratany Meksikana ianao, ny Manampahefana Momba ny Fiarovana ny Rakitra dia nanome FAQ mikasika ny fomba ahafahanao mangataka ny rakitra manokana momba anao notazonin'ireo orinasa tsy miankina.
Aza miala amin'ireo fanampim-baovao :
Tantaran'ny Meksika farany
16 Jolay 2021Amerika Latina
08 Jolay 2021Amerika Latina
09 Jona 2021Fitantanam-pitondrana